bing + twitter = chaiyo nguva yekutsvaga | Martech Zone
bing + twitter = chaiyo nguva yekutsvaga
China, Gumiguru 22, 2009 Svondo, October 4, 2015 Adam Mudiki
Microsoft yakafumura chinhu chitsva chebing yavo yekutsvaga injini- kutsvaga kwe twitter. Iyo iri pa bing.com/twitter uye yatove kurarama. Zvinoenderana neMicrosoft iyi inhanho huru inoenda mukutsvaga kunotsamira pane chaiyo-nguva data kupesana neakachengetedzwa ma link Kuzivikanwa kwetweeter kuchavewo nekukanganisa pamhedzisiro yematanho.
Google yakakurumidza kutevera Microsoft (haunzwi izvozvo kazhinji!) Uye vakazivisa yavo chaiyo-nguva twitter yekutsvaga gare gare muzuva.
Iko kugona kwekutsvaga mune chaiyo-nguva ipaceacea yemakambani enjini yekutsvaga uye ini ndinogona kuona iko kusanganisa yakakurumbira nhepfenyuro yemagariro enhau kunogona kupa mukana wekukwikwidza asi ini ndinogona zvakare kuiona ichizadza mhinduro dzekutsvaga.
Kubva pakuona kwekushambadzira ndinofunga inogona kupa mukana wakakura kune vezvenhau savvy kambani yekuzvisimudzira kana zvigadzirwa zvavo. Sezvo injini dzekutsvaga dzavaka muRSS kugona, izvi zvicharatidzawo kukwikwidza - sezvo makambani achikwanisa kupindura nekuita kuma-real-time tweets! Iwe unofanirwa kunge uchigadzira tani yezaziso pamakwikwi, maindasitiri nemakambani nekukurumidza mhedzisiro yatanga kurarama.
Wadii kusanganisa iyo twitter mhedzisiro mumhedzisiro kubva kunowanzo tsvaga Kana ndichifanira kuenda kune yakatsvaga yekutsvaga injini kutsvaga ma twitter mhinduro wadii kungotsvaga twitter uchishandisa tweetdeck, seemic kana imwe desktop desktop? Pfungwa?
Tags: apuimhedzisiro yebhizinesikamera +cokekushambadzira kwevanhu
Dhinda 1 Kana Uine Bhajeti
Marketpath - Yakareruka Zvemukati Management
Gumiguru 23, 2009 pa 1:44 AM
Mushure mekushandisa kutsvaga kweTwitter, Zvichava zvinonakidza kwazvo kuona izvo zvishandiso zvinouya kubva mukuburitsa iyi ruzivo kune enjini dzekutsvaga uko vanhu vanogona kuvaka yechitatu bato kunyorera kubva kwavari.
Gumiguru 23, 2009 pa 4:45 AM
Ini ndinofunga chinonyanya kufadza chinhu kutarisa apa ndechekuti chaiyo-nguva yekutsvaga mhedzisiro inozoverengerwa zvichibva pasimba (retweets uye # yevateveri), izvi zvichaisa kumanikidza kwakawanda kumabhizinesi kuti vave vatori vechikamu vanoshingairira muhurukuro.
Kutepfenyura mameseji ku twitter kunenge kuri kuita zvisina basa. Kufurira vanhu, kuita kuti zvemukati zviratidzwe, vanhu vachiwedzera yako kune avo 'zvinyorwa' kana #FF ndipo panogara simba rese.
Izwi rekuti 'be relevant izvozvi' ndiyo itsva mantra pawebhu.
Gumiguru 25, 2009 na12: 55 PM
Kutsvaga kweBing Twitter hakuwanikwi munzvimbo ino.
Kana uchida kuenda kuBing Twitter Search, chinja nzvimbo yako kuenda kuUnited States. "